Gịnị Ka M Ga-eme ma Ọ Bụrụ na Ahụ́ Adịghị Mama M ma Ọ Bụ Papa M? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Pangasinan Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ihe gbasara ilekọta ndị ahụ́ na-adịghị anaghị echu ọtụtụ ndị na-eto eto ụra. A sị ka e kwuwe, o nwere ike iwe ọtụtụ afọ tupu mama ha ma ọ bụ papa ha arịawa ahụ́.
Ma, gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụkwanụ na mama gị ma ọ bụ papa gị amalite ịrịa ahụ́ mgbe ị ka na-eto eto? Lee ihe ndị na-eto eto abụọ ụdị ihe a mere kwuru.
Mama m na-arịa otu ọrịa a na-akpọ Ehlers-Danlos syndrome (EDS). Ọrịa a na-enye nsogbu n’ọkpụkpụ, n’anụ ahụ́, nakwa n’akwara.
E nweghị ọgwụ e ji agwọ ụdị ọrịa ahụ, o meekwala ka ahụ́ mama m ka njọ kemgbe afọ iri gara aga. O nwedịrị mgbe ọ na-afọ obere ka ọ nwụọ n’ihi na ọbara adịghị ya n’ahụ́, nweekwa mgbe ụdị ụfụ ọ na-afụ ya na eme ka ọ dị ya ka ya nwụọ.
Anyị bụ Ndịàmà Jehova, ndị anyị na ha nọ n’ọgbakọ na-enyekwara anyị ezigbo aka. Dị ka ihe atụ, n’oge na-adịbeghị anya, otu nwata nwaanyị mụ na ya nwere ike ịbụ ọgbọ, ziteere ndị ezinụlọ anyị ọmarịcha kaadị iji gwa anyị na ọ hụrụ anyị n’anya na iji gwa anyị na ọ ga na-enyere anyị aka. Obi dị m ụtọ na m nwere enyi dị ka ya.
Baịbụl enyekwarala m ezigbo aka. Dị ka ihe atụ, amaokwu kacha amasị m bụ Abụ Ọma 34:18, ebe sịrị: “Jehova nọ ndị obi ha tiwara etiwa nso.” Amaokwu ọzọ na-amasịkwa m bụ Ndị Hibru 13:6, bụ́ ebe sịrị: “Jehova bụ onye na-enyere m aka; agaghị m atụ egwu.”
Ọ bụ amaokwu ikpeazụ a kacha abara m uru. Ihe kacha atụ m egwu bụ na mama m ga-anwụnahụ m. M hụrụ ya n’anya nke ukwuu, obi na-adịkwa m mma ụbọchị ọ bụla ma mụ na ya nọrọ. Amaokwu Baịbụl ahụ mere ka obi sie m ike na mụ ekwesịghị ịna-atụ ụjọ ọdịnihu n’agbanyeghị nsogbu ọ bụla nwere ike ịbịanụ.
Ma e nwere ihe ọzọ na-atụ m egwu. Ihe ahụ bụ na ọrịa a mama m na-arịa si n’ọbara. Mama m butere ya n’aka mama ya, mụnwa ebutekwa ya n’aka mama m. N’eziokwu, mụnwa na-arịakwa ọrịa ahụ mama m na-arịa. Ma Ndị Hibru 13:6 emeela ka obi sie m ike na Jehova bụ onye ga “na-enyere m aka” n’ọrịa a m na-arịa.
Ka ọ dịgodi, m na-agbalị ka ihe ndị m nwere ugbu a na-eme m obi ụtọ. Anaghịkwa m eche gbasara ihe ndị mere m ma ọ bụ na-echegbu onwe m maka ọdịnihu. Ike ga-agwụ m ma m chewe ihe ndị mama m na-emelibu na ihe ndị ọ na-anaghị emelizi ugbu a. Baịbụl kwuru na ọnwụnwa ndị na-abịara anyị “na-adịru nwa oge, dịkwa mfe” ma e jiri ya tụnyere olileanya anyị nwere ịdị ndụ ebighị ebi na-arịaghịzi ọrịa.—2 Ndị Kọrịnt 4:17; Mkpughe 21:1-4.
Ihe ị ga-echebara echiche: Gịnị nyeere Emmaline aka ịna-enwe obi ụtọ? Olee ihe ị ga-eme ka ị na-enwe obi ụtọ mgbe nsogbu bịaara gị?
Mgbe m na-aga ụlọ akwụkwọ sekọndrị bụ mgbe mbụ papa m dara mba n’obi. Ọ dị m ka ọ bụghị papa m ahụ m mabu ka m na-ahụzi. Kemgbe ahụ, obi ọjọọ, egwu na nchekasị bụ ihe ya na ya na-alụ mgbe niile. Ọ rịala ọrịa a afọ iri na ise. Ama m na ọ dịghịrị ya mfe idi obi na-ajọ ya ezigbo njọ n’agbanyeghị na ọ ma na e nweghị ezigbo ihe mere obi ji kwesị ịna-ajọ ya njọ.
Anyị bụ Ndịàmà Jehova, ndị ọgbakọ anyị na-enyekwara anyị ezigbo aka. Ụmụnna anyị ndị ahụ nwere obiọma, ha na-aghọtakwa otú ihe si dịrị anyị. E nwebeghị onye mere ka papa m chee na o nweghị uru ọ bara n’ọgbakọ. Otú papa m si edi ọnwụnwa a bịaara ya mere ka m hụkwuo ya n’anya.
Ọ dị m ka papa m ahụ na-anaghị echegbu onwe ya, ọrịa na-ejighị, na-enwekwa obi ụtọ lọghachi, dịrịkwa otú ọ dị na mbụ. Ọ na-ewute m nke ukwuu na papa m ga na-alụso ọrịa a a na-anaghị ahụ anya ọgụ kwa ụbọchị.
N’agbanyeghị ihe a ya na papa m na-alụ, ọ na-agbalị na-enwe obi ụtọ. N’oge na-adịbeghị anya ọrịa ahụ ji ya aka ọjọọ, ọ gbalịrị na-agụ Baịbụl kwa ụbọchị, ọ bụrụgodị na ọ bụ amaokwu ole na ole. Ọ bụ ihe nyeere ya ezigbo aka inwe obi ike. Baịbụl ahụ ọ na-agụ, e nwere ike ịsị na ọ bụ obere ihe, zọrọ ya ndụ. Ihe papa m mere mgbe ahụ tọgburu m atọgbu.
Ihe e dere na Nehemaya 8:10 na-atọ m ụtọ. Ebe ahụ sịrị: “Ọṅụ Jehova bụ ebe unu e wusiri ike.” Ọ bụ nnọọ eziokwu. Oṅụ m na-enwe ma mụ na ụmụnna m nọrọ, ma m gaa ọmụmụ ihe, zaa ajụjụ ma ọ bụ mee ihe omume, na-eme ka m chefuo ihe ndị ahụ na-ewute m. Ọ na-eme ka obi dị m mma ụbọchị ahụ niile. Ihe a ya na papa m na-alụ akụzierela m na Jehova ga na-enyere anyị aka n’agbanyeghị ụdị nsogbu ọ bụla bịaara anyị.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee otú Emily si nyere papa ya aka n’ọrịa ya? Olee otú i nwere ike isi nyere onye dara mba n’obi aka?
Ihe Ị Ga-eme ma Ọ Bụrụ na Ahụ́ Adịghị Mama Gị ma Ọ Bụ Papa Gị
Baịbụl kwuru na Chineke kpọrọ mmegbu asị, kwuokwa na ihe banyere anyị na-emetụ Chineke n’obi.